असुरक्षीत गर्भधारणबाट यसरी बच्ने ? – Everest Dainik – News from Nepal
असुरक्षीत गर्भधारणबाट यसरी बच्ने ?
एजेन्सी । सेक्स भनेको मानव जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर हाम्रो समाजमा सेक्सलाई संकुचित भावनाले हेरिन्छ । र यसका बारेमा खुलेर कुरा गरिदैन ।
सेक्सका बारेमा हेरक व्यक्तिले जान्नैपर्छ र बुझ्नै पर्ने हुन्छ तर हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । सेक्सका बारेमा हामी जति धेरै जानकारी राख्छौ त्यतिनै धेरै हामीलाई फाइदा हुन्छ । र बैवाहिक जीवन सुःखद पनि ।
सेक्स कहिले र कसरी गर्ने ? महिनावारी परियडमा सेक्स गर्ने की नगर्ने ? गरे कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ताकि अनावश्यक गर्भ नरहोस्। यी र यस्तै प्रश्नबाट धेरै मानिस पीडित हुन्छ तर सकैसंग यसबारेमा जानकारी लिन वा बताउन सक्दैनन् ।
सेक्सलाई लिएर सबैभन्दा बढी जिज्ञासा महिनावारीको समयमा हुन्छ। एक आम धारणा छ कि महिनावारी भएको करिब १६ दिनपछि गर्भ रहने सम्भावना अपवादबाहेक हुदैन ।। तर प्रत्येक महिलाको महिनावारी चक्र अलग अलग हुन्छ । यो पनि जरुरी छैन् कि तपाईको माहिनावारी भएन भने तपाई गर्भवती हुनुभयो ।
तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न यो शंका अब घर बसेरै दूर गर्नसक्नुहुन्छ । कुनै औषधि पसलबाट प्रेग्नेन्सी चेक किट ल्याउनुस् र ५ मिनेटमा पत्ता लगाउनुस् कि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न् ।
यसका लागि विहानै पहिलो यूरिन किटमा दिएको कार्डको माथि हाल्नुस् । पाँच मिनेटपछि रिजल्ट आउनेछ । गर्भधारणबाट बच्नका लागि कैयौ विकल्प छन् । ती मध्ये तपाई आफूलाई उपयुक्त लागेको विकल्प रोज्न सक्नु हुन्छ । । सेक्सको क्रममा कण्डमको प्रयोग गर्दा पनि गर्भ बस्दैन् । तर, कण्डम प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला त्यसको सही प्रयोगबारे जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।
असुरक्षित यौनसम्पर्कपछि गर्भधारण रोक्ने केही उपाय :
केही घरेलु उपाय :
– यदि महिलाले रेंडीको गुदा ९अरण्डको गुदा र विउ–एक प्रकारको जडीबुटी० खाएमा २ वर्षसम्म गर्भ बस्दैन् ।
ट्याग्स: Unsafe Pregenancy